एक सीमित समयको लागी, तपाईं को लागि केवल एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट केटीनिक कुकबुकको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मुफ्त!
यो एकदम स्वादिष्ट केटिजनिक कुकबुक हो 100% FREE र 150 स्वादिष्ट केजेनिक व्यञ्जनहरु मा शामिल छ!
यो पुस्तकको एक भौतिक प्रति निःशुल्क उपलब्ध छ सबै तिनीहरू शिपिंग र हैंडलिंगको लागि भुक्तानी गर्नका लागि सोधिरहेका छन् सबै छन्। यदि तपाईलाई भौतिक प्रतिलिपि आवश्यक छैन भने, तपाईं आफ्नो डिजिटल प्रतिलिपिको लागि निःशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ!
मा "5 विचारतपाईंको निःशुल्क क्याटो कुकबुक दाबी गर्नुहोस्"
यदि तपाइँसँग बेकन र बटर केटो पुस्तकको लागि शिपिंग सम्बन्धी कुनै प्रश्नहरू छन् भने, तिनीहरू तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्षम हुनेछन् support@ketoresource.org वा तपाईं क्लिकबैंक अर्डर समर्थन टोलीमा पुग्न सक्नुहुनेछ https://www.clickbank.com/corp/support/
मैले2/ 8 / 18 मा आदेश दिए र शिपिंगको लागि भुक्तानी गरे। अझै पनि3/ 23 / 18 को रूपमा भौतिक पुस्तक भेटिएन।